Ebe nrụọrụ Ecommerce kacha mma 2016-2017 | ECommerce ozi ọma
Saịtị Ecommerce kacha mma 2016-2017
Ì nwere ihe ndị ị ga-akwụ ụgwọ iji chọọ uru karịa ịtụfu ha? Havenweghi oge iji hazie ụlọ ahịa ụgbọala? You chọrọ ịzụta ngwaahịa ọhụrụ na-ahapụghị ụlọ? Mgbe ahụ n'ezie ị ga-enwe mmasị ịmara saịtị ịntanetị kachasị mma iji mee ka ọrịre / ịzụta ngwaahịa; Ndị a bụ saịtị ntanetị kacha mma 2016-2017 taa.
Ndị malitere dị ka a obere oru ire ahia na 1995, Craigslist ghọrọ onye ama ama na United States wee bụrụ mba ụwa ugbu a na mba dị iche iche. Ọ bụ ezigbo nhọrọ ịre ma zụta ngwaahịa nke abụọ dịka ekwentị, consoles egwuregwu vidiyo, akwụkwọ, wdg.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa ejiri mee na ụdị mmanya, Etsy bụ saịtị Ecommerce maka gị. Ntọala na 2005, Taa Etsy nwere ihe karịrị 1.4 nde ndị na-ere ahịa. Na Etsy ị nwere ike zụta ma ree ngwaahịa ndị na-atọ ụtọ ejiri aka mee, nwere ụdị pụrụ iche ma na-adọta anya.
Chọta ihe niile belụsọ ndị nkịtị. " Nke ahụ bụ okwu okwu Bonanza, saịtị Ecommerce ebe ị nwere ike ịchọpụta ngwaahịa nkịtị. Ọ dị mfe iji, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ọnọdụ ahịa gị, ị nwere ike ịhazi ya site na ịmepụta ụdị anya maka ndị ahịa gị n'ọdịnihu.
Otu n'ime kasị ecommerce saịtị na ebe ahụ, nke ị nwere ike ịchọta ma zụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ọ bụla i nwere ike iche n'echiche. A na-enweta ya na mba karịrị 15, nwere ihe karịrị 240 nde ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike; Amazon malitere dịka, maka ọtụtụ akụkụ, ụlọ ahịa akwụkwọ. Mana ka oge na-aga, ọ gbasaa, taa ọ dị elu na ndepụta nke saịtị kachasị ibu ịzụrụ ihe n'ịntanetị.
Anyị niile anụla banyere ebay n’oge ụfọdụ; Otu n'ime saịtị ntanetị kasị ukwuu n'ụwa. Ọ nwere ihe karịrị 150 nde ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike ma bụrụ ihe ama ama na akpọrọ ya na fim Hollywood. Na ebay ị nwere ike ịchọta ihe niile site na ngwaahịa eletrọniki, akwụkwọ na egwuregwu vidiyo. Obi abụọ adịghị ya, eBay bụ ezigbo ezigbo ihe atụ nke Ecommerce kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Saịtị Ecommerce kacha mma 2016-2017
Ndenye ndebiri ọhụụ maka saịtị Ecommerce
Ndụmọdụ maka ijikwa Ecommerce na netwọkụ mmekọrịta